သတိရမိတယ် မြတ်နိုးရယ်(သို့) ရည်းစားဦးမွေးနေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » သတိရမိတယ် မြတ်နိုးရယ်(သို့) ရည်းစားဦးမွေးနေ့
သတိရမိတယ် မြတ်နိုးရယ်(သို့) ရည်းစားဦးမွေးနေ့
Posted by Aung Myat Lin on Apr 30, 2013 in Drama, Essays.., My Dear Diary |9comments
ဒီနေ့ဆိုရင် မြတ်နိုးအသက်(၃၀)ပြည့်ပြီနော်။ အခြေအနေ မပေးလို့ တစ်ပြည်တစ်ရွာဆီမှာ ဝေးခဲ့ကြပေမယ့် ခုထိ မြတ်နိုးကို သတိရနေမိတာတော့ အမှန်ပါ။ မြတ်နိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တာ အခုဆိုရင်(၁၂)နှစ်တောင် ကျော်သွားပြီနော်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ မနေ့တနေ့ကလိုပါပဲ။ ပြန်စဉ်းစားမိရင် အတိတ်က အကြောင်းအရာ တွေအားလုံးဟာ ကြေးမုံမှန်တချပ်လိုပါပဲ။ သတိရနေမိတာ အမှန်ပါ။ မြတ်နိုးနဲ့အတူလျောက်လည်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးတွေရောက်တိုင်း အတိတ်က အကြောင်းတွေကို ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ တသသ လွမ်းနေမိတယ်။ ကိုယ့်မှာ လွမ်းပိုင်ခွင့်တော့ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား မြတ်နိုးရယ်……..။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ တဇွတ်ထိုးဆန်တတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ် လမ်းခွဲခဲ့ရတယ် ဆိုတာ နောင်တရနေမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ် ဘာမှ မသိခဲ့ဘူးလေ ကိုယ့်အသက်(၂၁)နှစ် မြတ်နိုးက(၁၈)နှစ်လေ။ ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရှိသေးတဲ့ ရူးရူးမိုက်မိုက်အရွယ်ပေါ့။ မြတ်နိုးက ကိုယ့်ထက်သာ ငယ်တာ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်လေ။ ကိုယ်ကတော့ မြတ်နိုးကို ချစ်နေမိတာ တစ်ခုပဲသိတယ်။ မြတ်နိုးနဲ့ အမြဲတမ်းတွေ့ချင်တယ်။ မြတ်နိုးမျက်နှာလေးကို တနေ့တနေ့ မတွေ့ရရင် မနေနိုင်ဘူးလေ။ အရာရာ အားလုံးဟာ ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲ မြတ်နိုးရယ်….. မြတ်နိုးနဲ့အတူတူ လျောက်လည်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးတောင်ကြီးရယ်…. မန္တလေးကန်တော်ကြီးရယ်…. ဦးပိန်တံတားရယ်…. ဟိုးအရင်က နန်းတော်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်းဝမြို့ဟောင်းရယ်… စစ်ကိုင်းတောင်ကြီးရယ်… အားလုံး… အားလုံး… အားလုံး… လွမ်းမိတယ်ကွာ… အတိတ်ကိုသာ ပြန်သွားလို့ရရင် ကိုယ် အရာရာ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါရစေ…။ မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ နေတိုင်း အတူတူ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာယီလေးရော ရှိသေးရဲ့လား…။ တကယ်တော့ မြတ်နိုးက ငယ်သေးတော့ ရင်မဆိုင်ရဲတာပါ။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ် ခွဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလည်း ရောက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြတ်နိုး မိဘတွေက မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ့် ကို ခွဲလိုက်ကြတယ်နော်…။ ကိုယ် မှတ်မိပါသေးတယ်…..
မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့စတွေ့တာ မန္တလေးက ကွန်ပျူတာသင်တန်း တစ်ခုမှာပေါ့။ ကိုယ်က သင်တန်းဆရာဆိုပေမယ့် မြတ်နိုးထက်(၃)နှစ်ပဲ ကြီးတာလေ။ မြတ်နိုးက နယ်ကနေသင်တန်း လာတက်တဲ့ သင်တန်းသူလေးပေါ့။ မန္တလေးက အဒေါ်တွေဆီမှာနေရင်း သင်တန်းတက်တာလေ။ အိမ်ပြန်ချိန်မှာ လမ်းက ရှုတ်တော့ မြတ်နိုးစက်ဘီးမစီးတတ်ဘူးလေ ကိုယ်က လိုက်ပို့ ပေးရတာ နေ့တိုင်းပေါ့။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် ထိုင်နေကျ ကန်ပတ်လမ်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကတော့ ခုထိ ရှိတုန်းပဲ။ အဲဒီဆိုင်ထဲမှာပဲ “မြတ်နိုးကို ချစ်တယ်” လို့ ဒိုင်ယာယီစာအုပ်ထဲမှာ ရေးပေးခဲ့တာလေ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မြတ်နိုးရဲ့ရှက်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကို ခုထိ မြင်ယောင်နေတုန်းပဲ…..။ နောက်တော့ ရည်းစားဘဝကို ရောက်သွားတော့ သင်တန်းပိတ်ရက်တွေမှာ ချစ်သူတွေ သွားတတ်တဲ့ နေရာလေးတွေ အနှံ့ပါပဲ။ မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လက်ချင်းချိတ်လို့ပေါ့။ တသက်လုံး မခွဲဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြတယ်လေ။ ခုတော့ အဲဒီစကားတွေကို အချိန်ဆိုတဲ့အရာက ဆုံးဖြတ်သွားခဲ့ပြီ။ လွမ်းတယ် ကွာ……….
မှတ်မှတ်ရရ ပေါ့ မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ လျှောက်လည်ရင်း အချိန် ကုန်မှန်းမသိကုန်သွားခဲ့တယ်။ ကိုယ်က မြတ်နိုးနဲ့အမြဲတမ်း အတူရှိချင်တာလေ။ ည(၈)နာရီလောက်မှ မြတ်နိုးအိမ်ကို လိုက်ပို့ရင်း မြတ်နိုး အဒေါ်တွေနဲ့ တွေ့လို့ သိသွားတယ်။ အဲဒီအချိန်က စပြီး မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အရင်ကလို တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူး။ တခါတလေမှ ခိုးပြီးတွေ့ရတာ။ ကိုယ်ဆို မြတ်နိုးတို့ အိမ်နားကို မယောင်မလည်နဲ့ ခဏခဏ လာစောင့်နေတာလေ တခါတလေ အချိန်သာ ကုန်သွားတယ် မြတ်နိုးမျက်နှာလေးကို တွေ့ခွင့်တောင် မရခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ မြတ်နိုး အဒေါ်တွေက နယ်ကို ပြန်ပို့လိုက်တယ်လေ။ ကိုယ်တို့အဖြစ်ကလဲ ဆိုးလွန်းတာလား။ ကိုယ်က ချစ်ကံခေတာလား မသိဘူး။ မြတ်နိုးပြန်တဲ့နေ့က ကားဂိတ်မှာ ကိုယ်လာတွေ့တယ်လေ။ မြတ်နိုးမျက်နှာလေးကို မြင်ယုံပဲ မြင်လိုက်ရတာ စကားပြောခွင့်တောင် မရလိုက်ဘူး။ မြတ်နိုးတို့ ကားထွက်သွားတော့ ကိုယ် စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ မြတ်နိုးကားနောက်ကနေ လိုက်သွားတာ နောက်တော့ မြတ်နိုးက ကားပေါ်ကနေ လက်ကိုင်ပုဝါလေး ချထားပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ မမျှော်လင့်တဲ့ မိုးက ရွာချလိုက်တာ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်လုံး မိုးရေတွေ ရွှဲနေတာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က မိုးရွာထဲမှာ မိုးစိုနေတဲ့ အဝတ်တွေနဲ့ ကိုယ်လျှောက်သွားနေမိတယ်။ နောက်တော့ မြတ်နိုးကို ကိုယ်ဆက်သွယ်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ ဆက်သွယ် လို့မရတော့ဘူး….။ အဲဒီကတည်းက မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဝေးခဲ့ကြတာ ဒီနေ့ထိပဲလေ။
မြတ်နိုးရဲ့ မွေးနေ့ဆိုရင် ကိုယ်အမြဲ သတိရနေတယ် 2013 ခုနှစ် မတ်လ(၁)ရက်နေ့ဆိုရင် မြတ်နိုး အသက်(၃၀)ပြည့်ပြီနော်။ “မြတ်နိုး တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်သော မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ” လို့ ကိုယ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက မြတ်နိုးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အတူတူ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်အမြဲတမ်း ဆိုနေမိတဲ့ သီချင်းလေး အဲဒီအတိုင်းပဲဖြစ်သွားတာလား
သက်ဆိုင်တဲ့သူ တို့နှစ်ဦး နီးရရက်ကို
ကံကိုပုံကာပင် အချစ်ကို တမ်းတစွာ
လွမ်းနေရတယ် ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟသည့်တိုင်
လူတောင် ၁၅ နှစ်လောက် ပြန်ငယ်သွားသလိုပဲ
မဆုံခဲ့တဲ့ ရဲဇားဦးကို လွမ်း တာဗျာ
Aung Myat Lin says:
အဲ … တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ
အနော်လဲ တကယ်ဗျ ခုထိ သတိရနေတုန်းပဲ
ဒါပေမယ့် ဝေးခဲ့ပါပြီ လေ
ဒီနေ့ မွေးနေ့မှတ်လို့။ ခေါင်းစဉ်ပဲကြည့်လိုက်တော့။
( မြတ်နိုးရဲ့ မွေးနေ့ဆိုရင် ကိုယ်အမြဲ သတိရနေတယ် 2013 ခုနှစ် မတ်လ(၁)ရက်နေ့ဆိုရင် မြတ်နိုး အသက်(၃၀)ပြည့်ပြီနော်။ )
ကိုယ်တိုင်ရေးဖြစ်ပီး ကက်တဲဂိုရီမှာ “ Copy/Paste” ဖြစ်နေတယ်ဗျ..အဲဒါဆိုပွိုင့်မရဘူး
နောက်ဆို စာမတင်ခင် ကက်တဲဂိုရီမှာ တစ်ခုခုရွေးပီးမှတင်…
ညာဘက်အခြမ်းမှာ “ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..” ဆိုတာလေးရှိတယ်..
စေတနာနဲ့ သတိပေးတာပါဗျား.. :hee:
ဖတ်ရင်းနဲ့ သူကလေးတောင် ရည်းစားဟောင်းလေးတွေကိုလွမ်းလာဘီ (အဲလိုပဲ လူရှိန်အောင်ပြောရတာ)
ရည်စားဦး မြေးဦးရတောင် မမေ့ဘူးတဲ့
ရည်းစားဦးကိုလွမ်းတာမို့ ပြောတာတော့ကောင်းပါတယ်။ လွမ်းလောက်စရာပေမဲ့ အခုချိန်မှာ နှစ်ဘက်လုံး ပဲဖြစ်ဖြစ် တဘက်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်သူရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ အဲဒီသက်ဆိုင်သူတွေကို အားနာစရာပါ။ ကျွန်မကတော့ ရည်းစားဦးဆိုတာ တသသလွမ်းစရာမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူထားတာမို့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ပဲကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါ တယ်။ ရည်းစားဦးပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘဝရဲ့လက်တွဲဖော်မဟုတ်လို့ ကျန်ခဲ့ တာ နှမျောတသသနဲ့အချိန်ကုန်စရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မကြောင့်သူများခံစားချက်ပိုစ့်ကလေး ပျက်သွားရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မကအဲလိုလက်တွေ့မကျတဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှု့ကို မကြိုက်လို့ ကိုယ့်အမြင်လေးပြောရုံသက်သက်ပါ။
ဘယ်လိုကြီး ကွဲသွားကြတာတုန်း.. အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီး ကွဲသွားကြတာလား… ထပ်မတွေ့ကြတော့ဘူးလား… ဟင့်.. နိုချင်လိုက်တာ..